သမိုင်းကို ရဲရဲ ရင်ဆိုင်ပါ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| July 6, 2012 | Hits:4,466
17 | | ၂၀၁၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ ဗုံးခွဲဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်သည့် နေ့ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီ အောင်ပွဲ
အလုပ်သမားများ အပေါ် မြေနိမ့်ရာ လှံမစိုက်ကြစေလို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ကတိများ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ကိုအောင်အောင် July 6, 2012 - 8:44 pm	အာရှ နိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ် ရင် မဆိုင်ရဲ ကြဘူး။ ဂျပန် ဟာ ဥပမာကောင်းတခုဘဲ။ သူရက်ရက် စက်စက် လုပ်ခဲ့တာတွေကို ဘယ်တော့ မှ ၀န်မခံဘဲ နဲ. ငြင်းကွယ်ဖို. အမြဲကြိုးစားတယ်။ အဲတော့ ဂျပန်ဟာ သမိုင်းအရိပ်ဆိုးအောက်က မထွက်နိုင်ဘူး။ ဂျာမနီ ဆိုရင် သူ.အမှားကို လက်ခံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရှေ.ဆက်သွားတယ်။ အတိတ်ဆိုးအောက် က ရုန်းထွက်သွားတယ်။
ဗမာ စစ်ဗိုလ်တွေလဲ အတိတ်ဆိုးအောက်က ရုန်းမထွက်နိုင်ဘူး။ အတိတ်ဆိုးကို လက်ခံလိုက်ပြီး ရင် အနာဂါတ်ကို် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွားလို. ရပြီ။ အနှောင်အဖွဲ.ထဲ က ရုန်းထွက်နိုင်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူတို.က ရာစုနှစ်တ၀က်လောက်က ဆရာကြီး လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို.နဲ. မသိတဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးချင်ကြတာလား။ သူတို. ရဲ့ တပ်မတော် ဆိုတဲ့ ဟာကြီး အမှားလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို လက်မခံ ငြင်းဆန် ချင်တာလား။ စစ်ဗိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ရော သူတို.ဘာတွေကို ဗျောင် ဖုံးဖိနေရတယ် ဆိုတာကို နားလည်ကြရဲ့လား။
အတိတ်ကို ရင်ဆိုင်လိုက်ကြစမ်းပါ။ စစ်သားဆိုတာ ယောင်္ကျားတွေ ဆိုရင်ပေါ့။
Reply	lay hone July 6, 2012 - 11:48 pm	It is right that my country education standard is lower.
(unskilled manpower)-(Education and Training)-(semi-skilled manpower)-(work)-(skilled manpower)
As your opinion, Education and Training is very important but PhD and bachelors Degree Responsibilities were proliferated non knowledge.How does we have skilled manpower.?
Reply	soe July 7, 2012 - 12:26 am	သမိုင်းလား အုပ်ကျင်းလား ကုလားကျောင်းလား
Reply	ဦးအေးဆောင် July 7, 2012 - 7:44 am	တက္ကသိုလ် ဆိုတာ လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ နေရာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှဥာဏ်ပညာရှင်သန်တိုးတက်နိုင်မယ်။
Reply	မောင်မောင်ကျော်ဝင်း July 7, 2012 - 10:57 am	သိန်းစိန်အစုိုးရဟာ စစ်အုပ်စုက အင်ထုလိုက်တဲ့ အစိုးရအတုဖြစ်တယ်ဆိုတာ တဖြေးဖြေးရုပ်
လုံးပေါ်လာပါပြီ။ သိန်းစိန်က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေပါတယ်လို့ ရှေ့ ကအော်လုိုက်၊ စစ်တပ်က
နောက်ကနေ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလိုက်ပြီး တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်လိုက်နဲ့လုပ်နေကြတာ
အတော့်ကို အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်လွန်းလှပါတယ်။ ဒါဟာ နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်မှုရှိနေလို့ခုလို ရှေ့ နောက်မညီဖြစ်နေရတာပါ။ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတာ စစ်တပ်ကလွဲလို့ ဘယ်သူရှိနိုင်ဉီးမှာလဲ။ စစ်တပ်ကနောက်ကွယ်ကနေကြိုးဆွဲနေသမျှ အမိန့် အာဏာပေးမယ်၊ ဖမ်းဆီးမယ်၊ ချိမ်းချောက်မယ်၊ လစ်ရင်ဖြောင်ပစ်မယ် စတာတွေနဲ့ လွတ်ကင်းဖို့ မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့ ။ အစတုန်းကတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ဆီ ချီတက်ကြရအောင်ဆိုပြီး ခုတော့ လွတ်လပ်ခွင့်
တွေကိုအာဏာသံနဲ့ လိုက်ပြီး ပိတ်ပင်တားဆီးနေပြန်ပြီ။ စစ်တပ်ကို အမြစ်ပြတ်အောင် မလှန်
နိုင်သမျှ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရောက်ဖို့လမ်းသိပ်မမြင်ကြောင်းပါ။ သိန်းစိန်အစိုးရကို ယုံစားကြ
Reply	မောင်မောင်ကျော်ဝင်း July 7, 2012 - 11:26 am	၆၂ ၊ ၇ရက်၊ ဇူလိုင် အရေးတော်ပုံ တွင် စစ်အာဏာရှင် နှင့် နောက်လိုက်ခွေးတွေ ကို ဉီးမညွတ်ဒူးမထောက်ပဲ တိုက်ပွဲဝင်ကာ အသက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြသော နောင်တော် ကျောင်း
ကိုထွန်းသွင်၊ ကိုကြင်ဉီး၊ လက်ပွါးသိန်းမြင့်၊ စောဝီးလ်ဖရက်၊ ကိုအောင်သန်း၊
ကိုသန်းထွန်း၊ နှင့်တွဲဘက်ထောင်မှ ရဲဘော်တို့ အားထာဝရသတိရလျှက်။
Reply	karenhtoo20 July 7, 2012 - 12:59 pm	သမိုင်းဆိုဒါ….အတိတ်ကအမှန်တရားကိုပြောပြတဲ.အဖိုးအိုတစ်ယောက်ဘဲ..
ဒါကြောင်.မို. နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ.သူတွေ စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေ သမိုင်းရဲ.အမှန်
Reply	Maung Kyaw Nu ,A former political prisoner of conscience July 7, 2012 - 11:53 pm	We salute all hero of 7th July. 50 years over ,we failed to follow and full fill our seniors who fought to restore rule of law.Our seniors were crushed by war dog Ne Win. Ne Win’s pet dogs crushed my fellows during 70s and my younger colleagues in 8888 ,2007s.
We betrayed Ko Aung San,Ko Ba Hin ,Ko Aung Gyaw ,Ko Salai Tin Maung Oo.
We joined hand with Ne Win’s pet dogs in the name of change, reconciliation and ceasefire. These war dogs controlled mostly all wealth ,news medias and power.They didn’t stopped killing ,arresting ,burning houses ,raping women and looting national and individual properties.
They recently killed more than 20 thousands Rohingyas ,burned thousands of houses and raped hundreds of women. The same ethnic cleansing are going against the Kachin and other ethnics.
Now ,the pet dogs start arresting student activists. How some people in the name of politic budding with these killer pet dog . If the politic is going like this,
it will take another 50 years to restore rule of law in Burma.
Freedom can not come to you with out shedding blood. Freedom is notabanana you can easily buy from the shop.
COME FORWARDS TO SAVE THE COUNTRY FROM WAR DOGS AND SO CALLED OPPORTUNIST POWER MONGER ACTIVISTS.
Salute to 7th July.
Reply	min mg mg July 8, 2012 - 12:33 am	သမိုင်းကို ပြည်သူကဖန်တီးတယ်လို့ဆိုတယ် သမိုင်းမှာအပြောင်းအလဲကို လိုခြင်သူကပြည်သူတွေဖြစ်ပြီး အပြောင်း အလဲကို ဆန့်ကျင်သူက အုပ်စိုးသူ အထူးသဖြင့် အာဏာရှင်တွေ ဒီထက်ထူးသူတွေက စစ်အာဏာရှင်တွေ ပါ။ သမိုင်းလို့ပြောရင် စနစ်ဆိုတာကို မေ့ထားလို့မရဘူးထင်တယ် ။ စနစ်ကို သဘောပေါက်မှ အဖြစ်ကိုနားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဖြစ်ကိုသက်သက်ပြောနေရင် စနစ်ကိုမေ့ထားရင် အဖြစ်ဆိုတာ အပေါ်ယံပြောင်လဲလို့ရပေမဲ့ စနစ် ကတော့ အမြစ်ကလှန်မှရတာပါ။ ဒါလေးတခုစဉ်းစားကြည့်ပါ –
Reply	Sao Khun Wan July 8, 2012 - 9:32 am	We pay homage to our brothers and sisters who sacrificed their lives for the democratic freedom of our University life and progressive culture. A group of military leaders who had not enough education, ideas and knowledge to assess the value of our students life spoiled everything systematically. Gunned down the activists, bombarded the symbol of students union and uprooted everything from the University campus. One and only Bo Aung Kyaw died by the Colonial troops during the strike but hundreds lost their lives by our own myochit Myanmar troops. It’sapity how and why we forget7JULY.
Reply	မမ July 9, 2012 - 3:50 pm	ဘာပညာမှမတတ်ဘဲဘာအလုပ်မှကြိုးကြိုးစားစားမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့လူကိုဖားပြီးပြား
နေအောင်ကြောက်ပြ ၊ကိုယ့်ထက်နိမ့်တဲ့လူကိုအသေနှိပ်ကွပ် ပြီးချမ်းသာချင်တဲ့လူတန်းစား
Reply	Shwe Ba July 10, 2012 - 1:01 pm	How ?
‘ Who is going to bell the cat ‘ ? Tell me how. Can you tell me how. How can you/ we ‘ face’ ? Tell us how.